Posted on 11 / 18 / 2019 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
1. Inona ny Pyridoxal Hydrochloride?
Hydrochloride Pyridoxal na vitaminina B6 dia otrikaina-matsiro azon'ny rano tsy fahita matetika amin'ny sakafo. Ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny sakafo mahavelona.
Rehefa ampiasaina ho famenony, Pyridoxal Hydrochloride dia afaka mitsabo na misoroka olana ara-pahasalamana maro. Matetika izy io dia entina amin'ny tsindrona, am-bava na amin'ny famenon-tsakafo.
Ny loharanom-pahalalana vitamina B6 pyridoxine hydrochloride amin'ny sakafo dia misy voam-bary, akoho / turkey, legioma ary voankazo.
2. Maninona ny bodybuilder no mila vitamina - pyridoxine Hydrochloride?
Amin'ny maha bodybuilder anao, mila sakafo mahavelona bebe kokoa ianao noho ireo izay mitondra fomba fiaina mipetrapetraka. B-6 pyridoxine hydrochloride dia manan-danja indrindra ho anao satria ilaina amin'ny phosphorylase hozatra izany, hetsika iray mifandraika amin'ny metabolisma glycogen. Raha fintinina dia mila vitamina B6 ianao ho an'ny metabolisma salama. Ny vitamina B6 dia manatsara ny asan'ny anzima izay mandray anjara amin'ny famotehana ny proteinina.
Ny fiantraikan'ny pyridoxine hydrochloride ao amin'ny vatana dia misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny anjara asany amin'ny metabolisma proteinina. Izay no antony ampiasanao azy dia tsara ny mihinana sakafo maraina proteinina alohan'ny hidiranao amin'ny gym. Azonao atao ihany koa ny mihinana sakafo misy proteinina mandritra ny fanazaran-tena nataonao alohan'ny fampiofanana anao, aorian'ny fampiofanana ary alohan'ny hatory.
Na izany aza, tsy midika izany hoe tsy miraharaha sakafo hafa ianao. Mila mineraly ilaina betsaka hafa ny vatanao mba hiasa tsara sy hiarovana anao amin'ny aretina.
Mila hery be koa ianao mandritra ny fotoana iasana. Ny pyridoxine hydrochloride dia mahasoa ny vatanao amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fandoroana gliosida ao amin'ny selao. Izany dia miantoka anao hanana angovo ampy.
Tamin'ny 1939, Folkers sy Harris no namaritra ny firafitry ny pyridoxine. Enin-taona taty aoriana dia nasehon'i Snell fa manana endrika roa ny B6: pyridoxamine sy pyridoxal. Ny anarana Pyridoxal Hydrochloride dia nanjary satria ny vitamina B6 dia homolojika pyridine.
Anisan'ireo vitamina B, ny Pyridoxal Hydrochloride no zava-dehibe indrindra amin'ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina. Izy io dia manampy amin'ny fitomboan'ny sela vaovao, manazava Pyridoxine hydrochloride bodybuilding fahaizana. Ny B6 koa dia manampy amin'ny fandanjanana ny potasioma sy ny sodium, ary amin'ny fanamboarana asidra amina, ny ADN ary ny RNA izay anisany koa.
Ny tsy fahampian'ny Pyridoxal Hydrochloride dia mitarika amin'ny fitaintainanana, fahasosorana, tsy fahitan-tory, fahalemena, lela mirehitra, fantsika voa, aretin-tratra ary osteoporose.
Na izany aza, araka ny fikarohana iray, ny fatra Pyridoxal Hydrochloride izay atolotry ny governemanta amerikana ho an'ny olona mavitrika dia tsy ampy.
Midika izany fa ireo izay mametra ny vondrona sakafo na mametra ny kaloria dia mety hiharan-doza amin'ny tsy fahampiana. Noho izany dia mety tsy hahazo tombony amin'ny pyridoxine hydrochloride izy ireo raha toa ka tsy mandray afa-tsy ny doka araka ny tolo-kevitry ny governemanta.
Miorina amin'ny valin'ity fikarohana ity dia fahendrena ny manatona mpitsabo anao mba hahitana ny fatra tsara indrindra / ampy pyridoxine hydrochloride bodybuilding ho anao.
B-6 pyridoxine hydrochloride mitana andraikitra lehibe amin'ny fandaminana ny toe-po. Izany dia satria mamorona neurotransmitters izay mifehy ny fihetsem-po. Pyridoxine hydrochloride ho an'ny fitondrana vohoka dia tena zava-dehibe ho an'ireo vehivavy mihetsi-po na manana fiovan'ny toetr'andro vokatry ny tsy fifandanjan'ny hormonina mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny fandinihana iray natao mikasika ny olon-dehibe 156 manana fahasembanana ara-pahalalana malefaka sy ny ambaratongan'ny homosisteinina avo lenta dia nahatsikaritra fa ny fatran'ny pyridoxine hydrochloride avo lenta dia mampihena ny haavon'ny homositôly ao anaty rà ary koa mampihena ny fahasimban'ny ampahany amin'ny ati-doha atahorana ho voan'ny Alzheimer.
Ny iray amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny pyridoxine hydrochloride dia ny fampiasana azy io hitsaboana ireo soritr'aretin'ny PMS ao anatin'izany ny fahasosorana, ny fahaketrahana ary ny tebiteby. Mino ny mpikaroka fa ny vitamina B6 dia afaka mitsabo ireo soritr'aretina ireo satria mamorona neurotransmitter manampy amin'ny fifehezana ny toe-po izany.
Nandritra ny am-polony taona maro, vitamina B6 no nampiasaina tamin'ny fitsaboana maloiloy sy mandoa amin'ny vehivavy bevohoka. Izy io koa dia singa iray an'ny Diclegis, fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-maraina. Ity dia iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ny pyridoxine hydrochloride ho an'ireo vehivavy mijaly noho io aretina io mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny fatra tsara pyridoxine hydrochloride amin'ny fitondrana vohoka dia miovaova arakaraka ny olona. Ny fandinihana natao tamin'ny vehivavy bevohoka 342 dia nahatsikaritra fa ny fatra isan'andro 30mg amin'ny vitamina dia nampihena be ny fahatsapanan'izy ireo dimy andro monja taorian'ny nanombohan'ny fitsaboana.
Ny Pyridoxine hydrochloride dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny fanentsenana ny arterà ka mampihena ny risika amin'ny aretim-po. Raha ambany ny vitamina B6 azonao, dia mety hitombo avo roa heny ny risika mahazo aretim-po raha ampitahaina amin'ireo izay manana ambaratonga ara-dalàna ao anaty ra. Ny vitamina B6 dia mampihena ny vitan'ny arterà manentsina amin'ny alàlan'ny fampihenana ny haavon'ny homocysteine ​​ao anaty ra.
Ity angamba no manan-danja indrindra pyridoxine hydrochloride ampiasaina ny fihanaky ny homamiadana ankehitriny. Raha mihinana ampy Pyridoxine hydrochloride ianao, hihena ny mety hisian'ny kansera sasany. Ny antony mahatonga izany tsy mazava nefa ny mpikaroka dia mino fa mifandray amin'ny fahaizan'ny B6 hiady amin'ny fivontosana izay miteraka aretina mitaiza toy ny homamiadana.
Tamin'ny fikarohana natao mba hamaritana ny fifandraisana misy eo amin'ny haavon'ny pyridoxine hydrochloride sy ny homamiadan'ny nono, dia hita fa ny habetsaky ny B6 ao anaty ra dia mampihena ny mety ho voan'ny homamiadan'ny nono, indrindra fa ireo vehivavy aorin-dehilahy.
Ny vitamina B6 dia manampy amin'ny fisorohana ny areti-maso, indrindra ireo izay mifandraika amin'ny fahanterana - degeneration macular (AMD) mifandraika amin'ny taona. Rehefa manana homocysteine ​​avo lenta ao amin'ny ranao ianao, dia ho voan'ny AMD ianao. Ny Pyridoxine hydrochloride dia manampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny homosisteine ​​avo lenta ao anaty ra ka mampihena ny risika AMD.
Ny fikarohana iray hafa dia nampifandray ny olan'ny maso amin'ny ambaratonga ambany amin'ny rà; indrindra ny olan'ny maso izay mitarika ny fanakanana ny lalan-drà mifandray amin'ny retina. Ny haavon'ny pyridoxine hydrochloride ambany dia mifandray amin'ny aretin'ny retina.
Pyridoxine hydrochloride dia azo antoka ampiasan'ny bodybuilder. Azo antoka ihany koa raha ampiasaina amin'ny fitsaboana. Na izany aza, misy vokany hafa amin'ny olona samihafa Ny sasany amin'ny voka-dratsin'ny pyridoxine hydrochloride dia misy:
Raha mahatsapa ny voka-dratsin'ny pyridoxine hydrochloride ianao dia tsara kokoa aminao ny mitady fitsaboana.
Ny fatra avo indrindra amin'ny Pyridoxal Hydrochloride dia mety miteraka aretina amin'ny neurolojia. Ireo aretina ireo dia mety hiteraka olan'ny fitoniana sy ny tsy fahatsapana amin'ny tongotra. Misy ihany koa ny tatitra sasany fa ny fatra avo amin'ny pyridoxine hydrochloride mety mitarika fanehoan-kevitra amin'ny hoditra. Soa ihany, rehefa mijanona ny fatra avo ianao dia ho sitrana tanteraka.
Rehefa eo am-panafody fanafody Pyridoxal Hydrochloride ianao dia tsy tokony hijanona, manomboka mampiasa azy miaraka amina fanafody hafa, na hanova ny fatra tsy ankatoavin'ny mpitsabo anao.
Na dia tsy misy fifandraisana lehibe na mahery amin'ny fanafody hafa aza ny Pyridoxal Hydrochloride dia tsara hatrany ny mitandrina.
Tahaka ny Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) manapotika an'io simika io mba hanafoanana azy amin'ny vatanao. Ny fandraisana ny Dilantin sy Pyridoxal Hydrochloride dia hampihena ny fahombiazan'ny teo aloha amin'ny vatanao. Izany dia mety hampitombo ny fahafahanao miaina fanelingelenana sasany.
Ny Pyridoxal Hydrochloride dia mifampiresaka malefaka amin'ny fanafody 70 mahery. Noho izany, alohan'ny hampiasana zava-mahadomelina miaraka aminy, alao antoka fa mifandray amin'ny mpitsabo anao ianao.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny Pyridoxal Hydrochloride ho an'ny bodybuilder dia be dia be. Tsy ny bodybuilder ihany, ny atleta matotra rehetra no mila manana an'io vitamina io ao anaty tahiry. Na izany aza, tokony ampiasainao amin'ny fanarahana tanteraka ireo fatra natolotry ny mpitsabo.
Fanontaniana 6 momba ny Afatinib amin'ny anti-caners (NSCLC)
Miasa tsara amin'ny fananganana hozatra ve ny MK-677 (Ibutamoren)? Sarm Review [Vaovao]
Ahoana no anampian'i Flibanserin ny vehivavy toy ny hormonina firaisana Powder Synephrine HCL - Famonoana menaka sy famenon-danja